आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. – SUDUR MEDIA
March 12, 2021 March 12, 2021 AdminLeaveaComment on आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…..
हिजो बिहीबार बढेको सुनचाँदीको मूल्य साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार घटेको छ। फागुन २८ गते, शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो।
यस दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ८६ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको थियो । शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला ८५ हजार ७५० रुपैयाँ तोकिएको महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ।
साताभरमा सुन प्रतितोला ६०० रुपैयाँले बढोत्तरी भएको छ। अघिल्लो साताको शुक्रबार सुन प्रतितोला ८५ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसयता भने सुनको मूल्यमा घटबढ भइरहेको छ। यस साताको उच्च कारोबार मूल्य बिहीबार रहेको थियो। सो दिन सुन प्रतितोला ८६ हजार ८०० रुपैयाँमा किनबेच भएको हो। यसैगरी मंगलबार न्यूनतम मूल्य प्रतितोला ८५ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको थियो।
सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि यस दिन गिरावट भएको छ। आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घट्दा प्रतितोला एक हजार २७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेकाे छ। बिहीबार चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतितोला एक हजार २८५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो।
चाँदीको भाउ गत सातायता २० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन चाँदी प्रतितोला एक हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघको तथ्यांकमा देखिन्छ। साताभर उतारचढाव रहेको चाँदी बिहीबार भने प्रतितोला एक हजार २८५ रुपैयाँको उच्चतम विन्दुमा पुगेकाे थियाे। मेरो लगानीबाट साभार